> Resource> Utility> Olee otú iji dozie Computer Black ihuenyo na buut
Black ihuenyo na buut, wont na-agba ọsọ!
Ndewo, mgbe ọ bụla m pịa Ike bọtịnụ na kọmputa m, ọ na-amalite na a nwa ihuenyo-agwa otú ọ wee gafee na njehie ruru ọhụrụ ngwaike ma ọ bụ ndị dị otú ahụ. Ọ jụrụ ihe ndị dị mfe dị ka "Run na mma-mode,-agba ọsọ na iwu ozugbo, na-agba na ndabere tupu nke a mere, ma ọ bụ na-agba ọsọ na-ahụkarị.) Edide otu n'ime ndị a m pịa ya dị nnọọ amama dum ihuenyo nwa, naanị ihe na-egosi na na-òké. Ọ na-arụ ọrụ ezi ụnyaahụ Ma n'ihi ihe ụfọdụ ọ bụghị taa. enyemaka ọ bụla-ekele, na-ekele gị. agba ọsọ Windows XP.
Computer nwa ihuenyo na buut nwere ike mere site ọtụtụ ihe mere ka Vista agha, ndiiche shutdown, ọjọọ sectors na ike disk, MBR jiri, buut oru mebiri emebi, ọ dịghị-arụsi ọrụ ike nkebi ma ọ bụ ndị ọzọ na esemokwu. N'agbanyeghị nke bụ nke gị, Wondershare LiveBoot buut CD / USB nwere ike ịbụ oké nnyemaaka n'ihi unu, nke nwere ike idozi gị nwa ihuenyo na buut, nakwa dị ka ime ka ị na-agba ọsọ na kọmputa gị were were mgbe ị na-emeso nsogbu a.
Mgbe ịzụta usoro ihe omume, ị ga-enweta a download njikọ si Wondershare. Download na wụnye ya na ezi-na-arụ ọrụ na kọmputa. Wee soro nzọụkwụ n'okpuru ike gị bootable CD ma ọ bụ USB mbanye na idozi kọmputa gị nwa ihuenyo na buut na nkeji.
3 nzọụkwụ idozi kọmputa gị nwa ihuenyo na buut elu
Step1. Ọkụ a bootable CD / USB mbanye
Na-agba ọsọ usoro ihe omume na kọmputa gị na fanye a ide CD ma ọ bụ USB mbanye, wee soro ọkachamara interface dị ka ndị na-esure a bootable CD ma ọ bụ USB mbanye. Ọ bụ a nwa-arụ ọrụ. Ị naanị mkpa pịa na-ere ọkụ bọtịnụ na interface n'okpuru, na n'aka ekpe-ere ọkụ na-arụ ọrụ ga-agwụ agwụ na sekọnd ole na ole. Ọzọkwa, ị na-adịghị mkpa nwere ihe mmezi burner arụnyere na kọmputa gị.
Ọzọ, na-echigharịkwuru gị nwa ihuenyo kọmputa. Nkwụnye ahụ nsure CD ma ọ bụ USB mbanye n'ime kọmputa na Malitegharịa ekwentị ya. Mgbe Windows logo egosi (tupu nwa ihuenyo na buut ngosipụta), ozugbo pịa F12. Mgbe ahụ ị ga-esi n'ime buut Ngwaọrụ NchNhr. Họrọ "onboard ma ọ bụ USB CD-ROM Drive" n'okpuru ya na ị ga-esi a menu dị ka ndị na. Họrọ "buut si LiveBoot" iji nweta gị na kọmputa.
Step3. Idozi kọmputa gị nwa ihuenyo na buut
The bootable CD / USB mbanye ga-eduga gị ka mma usoro gburugburu ebe obibi nke na-nyere site usoro ihe omume. Ọ na-ewe gị a nkeji ole na ole ga-esi na. Mgbe ị na, ị nwere ike ime ihe ọ bụla dị ka na gị na mbụ nkịtị usoro. Ma ihe mbụ i kwesịrị ime bụ idozi nwa ihuenyo na buut.
Mgbe Wondershare LiveBoot ọsọ, ị chọrọ ịga na "Windows Iweghachite" nhọrọ, mgbe ahụ, họrọ "buut Crash Ngwọta" na n'aka ekpe nke interface. Ebe a, ị ga-enweta ihe mgbaàmà, na-akpata na ngwọta gị na kọmputa buut okuku. Họrọ onye na-ezukọ gị requriement, na-eso ihe ngwọta e depụtara n'okpuru ebe na-esi gị mbipụta edozi.